सरकारका दुई अलङ्कार | Ratopati
personखगेन्द्र संग्रौला exploreकाठमाडौं access_timeचैत २३, २०७६ chat_bubble_outline1
स्व–क्वारेन्टाइनमा बस्न त बसेँ तर समय बिताउन मलाई पर्नु गाह्रो प-यो । यसो केही पढ्न बस्यो, इटलीको रुवाबासीले मेरा कानलाई अत्याउँछ । यसो यसो गीत सुनु भन्यो, स्पेनको हाहाकारले मेरो एकाग्रता खलबल्याउँछ । युट्युबमा कसैको बौद्धिक व्याख्यानमा यसो कान थाप्यो, अमेरिकाको सम्भाव्य विनाशले मेरो हंस हल्लाउँछ । अनि विश्वव्यापी कोलाहल र चित्कारले अताल्लिएको मेरो चित्त आफ्नै नेपालतिर फर्किन्छ । सोच्छु, अन्यत्रभैmँ नेपालमा कोरोनाको ज्यानमारा व्याधी व्याप्त भए के होला ? भयावह नतिजाको कल्पनाले मात्रले पनि मेरो मथिङ्गल रन्थिनिन्छ । र, मेरो व्याकुल चित्त डुब्न लागेको मान्छेले परालको त्यान्द्रो समातेभैmँ त्यान्द्रे सान्त्वनातिर लहसिन्छ । त्यान्द्रे सान्त्वना दुईवटा छन् । यी हुन्, दुई थान वर्तमानज्ञाता एवं भविष्यवक्ता विरलाकोटी प्रतिभा । र, तेस्रो त्यान्द्रो हुन् इसाई धर्मको कर्कश घण्ट बजाएर अनर्गल कुरा गर्दै हिँड्ेका पास्चरहरु ।
यी परमेश्वरका दूतरूपी पास्चरहरुका कुरा अन्त कतै गरुँला । अहिले यी दुई दुर्लभ एवं अद्भुत राष्ट्रिय प्रतिभाका कुरा गरूँ । लाग्छ, सत्ताको गद्दामा यस्ता पात्र न पहिले भए न पछि होलान् । यो राजधानी खाल्डोका तीनै सहरमा यतिका दिनमा यिनका सालिक बनिनसकेकोमा कृतघ्न लोकप्रति मेरो भारी खेद छ ।
कुरो किञ्चित् अमूर्त पो भयो कि ? अब पात्र किटान गरी कुरो खोलेरै कुरो गरूँ । मेरो देह उता अमेरिकामा नाति–नातिनीको समीपमा थियो, मेरो ध्यान यता नेपालमा थियो । बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म बहुविध अनलाइन जगत्मा म नेपालको खबर खोजी बस्थेँ । कोरोना भाइरसले कति मानिस सङ्क्रमित भए ? कति मानिस क्वारेन्टाइनमा छन् ? कति मानिस एकान्तबासमा छन् ? तिनको उपचार कसरी हुँदैछ ? उपचारकारी जनशक्ति र साधनको अवस्था के छ ? सरकार सदाझैँ गफै मात्र गरिरहेछ कि गफलाई व्यवहारमा ढाल्न केही न केही योजनाबद्ध यत्न पनि गरिरहेछ ? नेपालमा कोरोनाले कसैको ज्यान लिएको त छैन ? नानाओली विद्युतीय पर्दामा यी यावत् कष्टप्रद प्रश्नको उत्तर नभेटर म जिल परेँ । मानौँ यो विशाल जगत्को मानचित्रमा नेपाल भन्ने देशै छैन । मानौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अस्तित्त्वझैँ नेपाल कतै शून्यमा शून्यसरी बिलायो । हिमालपारि चीनको उहानमा विकराल कोलाहल र दारुण चित्कार छ, निकटवर्ती नेपालमा यो कस्तो सन्नाटा ?
माननीय मन्त्री पद्मामा मैले शक्तिरूपा दुर्गे भगवतीलाई देखेँ । मैले तिनमा विद्यादेवी सरस्वती मातालाई देखेँ । मैले तिनमा धनदेवी लक्ष्मी जननीलाई देखेँ । सम्भावित कोरोना आतङ्कबाट नेपाललाई बचाउने आखिर देवी–देवताले न हो । त्यसैले त हाम्रो हावा, पानी, माटो सुहाउँदो सरकार नानाओली निर्णय गर्छ, निर्णयअनुरूप कर्म गर्दैन । अनेकओली उद्घोष गर्छ, आफ्ना द्घोषहरुलाई जीवनमा उतार्न सचेत जमर्को गर्दैन । र नै त म भन्छु– वर्तमान सरकारका अस्सली प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा होइनन्, पद्मा अर्याल हुन् ।
व्यग्र जिज्ञासासाथ गर्धन तन्काएर नेपालतिर हेर्दै के थिएँ यो सघन सन्नाटा भङ्ग गर्दै एउटा मधुरवाणी गगनमा गुन्ज्यो । त्यो वाणी नारीको थियो । सास दबाएर कान थापेर सुनेँ, वाणी विचित्रको रहेछ । वाणीले साहसयुक्त स्वरमा भन्यो– डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालीका ज्यान दह्रा छन्, नाथे कोरोनाले छुन पनि सक्दैन । कुरो बुझ्दा त्यो दिव्य वाणी मन्त्री महोदयका मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भएको रहेछ । यसो नाम हेर्छु त गाँठ्ठे, त्यो अप्रतीम वाणीकी अपूर्व जननी रहिछन्– भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल ।
झाँक्री र ज्योतिषी, हस्तविद् र राशिफले, तान्त्रिक र पुरोहित एवं पास्चर आदि अन्धविश्वासका संवाहक र प्रसारक हुन् । यी सबका जोखाना र घोषणामा मलाई एकरत्ति विश्वास छैन । तर मन्त्री पद्माको चित्ताकर्षक वाणीमा भने मलाई विश्वास गरूँगरूँ लाग्यो । कटु सत्य कहँदा रिसानी माफ होस् मान्यवर, आजसम्मको हाम्रो नेपाल आफ्नो भाग्य आफैँ लेख्ने पौरखी जनको नेपाल होइन । यो भावीले छैटीमा भाग्य लेखिदिने नेपाल हो । यो विदेशी प्रभुहरुले नियतिको रेखाङ्कन गरिदिने नेपाल हो । यो अकर्मण्य मुद्रामा स्वैरकल्पनामा शून्य गगनमा विहार गर्दै विकास, समृद्धि र सुखको कल्पना गर्नेहरुको नेपाल हो । कोरोना भाइरसविरुद्ध विवेक, सावधानी, ऐक्यबद्धता, स्वास्थ्योपचार, साहस एवं उत्सर्गले लड्ने र जित्ने नेपाल यो होइन । यो सङ्कटमा आफ्नो उद्धारका लागि अरूसँग हात थाप्ने र आफ्नो दीर्घायुका लागि अरूकै कृपाको याचना गर्ने नेपाल हो । मैले विनोदी मुद्रामा अन्तर–संवाद गरेँ– यस्तो नेपालमा यो सङ्कटकालमा मन्त्री पद्मा अर्याल नभए अरू को हुनु ? नेपाल सरकारका ज्ञानी एवं जादुगरी प्रवक्ताले पद्माको जस्तो दिव्य वाणी प्रकट नगरे अरू के गर्नु ?
अमेरिकामा एक भूतपूर्व नेपाली मित्रले मलाई गिज्याए– के हो तेरो देशको यो चाल ? लड्नुपर्ने कोरोना आतङ्क यस्तो छ, तेरो सरकारको मन्त्री त्यस्तो छ ? के नेपाल अझै आदिम युगको अन्धकार गुफामै छ ? प्रत्युत्तरमा मैले प्वाक्क भनेँ– तिम्रो अमेरिका जहाँ छ, मेरो नेपाल त्यहीँ छ, । रहस्य, भ्रम, अफबाह, जालसाजी, अन्धविश्वास र षड्यन्त्रको सिद्धान्त तिम्रा राष्ट्रपति महामहिम ट्रम्पका जति प्रिय अस्त्र हुन्, मेरा प्रधानमन्त्री ओली महोदयका पनि यी त्यति नै प्रिय अस्त्र हुन् । तसर्थ मित्र, तिमी–हामी बराबरी हौँ । मेरो उत्तरले भूतपूर्व नेपाली मित्र सन्तुष्ट भएन । बरु ऊ त रमरम आक्रोशित पो भयो । किञ्चित् कठोर स्वरमा उसले भन्यो– यही तालले कोरोनाविरुद्ध लडेर नेपाल बाँच्छ त ? ल, मलाई -याख-याख्ती पार्न छाड्दैन त केटो । अब म के भनूँ ? अब भने नबोल्नुमै कल्याण छ भनेर मौन प्रत्युत्तरमा मैले मुन्टो निहुँराएँ ।
अमेरिकाबासी मेरा भूतपूर्व नेपाली लगौटियाले पुनः मलाई गिज्याए– यो के हो तेरो नेपालको चाल ? फेरि उस्तै अर्को आयो त ? के तेरो नेपाल ताल न तुकका तोरीलाहुरे गफले सुतीसुती कोरोनामुक्त हुन्छ ? के हो यो बहुलठ्ठीपन ? तेरो सरकारका मन्त्री माननीयको यो सिल्लीपन, यो के हो ? मेरा भूतपूर्व नेपाली मित्रले तर्कको सनासोले मेरो जिब्रो यसरी अँठ्याए, म हतप्रभ र गतिल भएँ । अब म के भनूँ ? दिन मिल्ने तर्कसङ्गत उत्तर आपूmसँग नभएर म पुनः निहुरमुन्टी ‘न’ भएँ । ओठे जबाफ दिँदै मलाई तिम्रो ट्रम्प नि त भन्न पनि मन लागेन ।
मेरा आँखा र कान नेपालतिरै थिए । कुन दिन नेपालमा कोरोना आतङ्कको भयावह चक्र सुरु हुने हो भनेर म त्रस्त थिएँ । मेरा सपना विग्रिन थाले । सपनामा म देख्छु, उः नेपालमा तुफानी वेगमा कोरोना फैलिन थाल्यो, उपचारको नाममा बालुवाटारको धुरीबाट केवल गफैगफको ओइरो लागिरहेछ । म त्यसै त्यसै कहालिएँ । भाग्यवश, मेरो व्याकुल एवं भयातुर चित्तलाई सान्त्वना दिन एउटा पुरुष वाणी गगनमा गुन्ज्यो । त्यो पुरुष वाणी उही नारीवाणीको लयमा प्रकट भयो । वाणीले सगर्व एवं सहर्ष भन्यो– नेपाल कोरोनामुक्त देश हो ।
म अब जगत्छेउ यो सुखद् सन्देश सञ्चार गर्छु र मुलुकमा पर्यटकहरुको खोलो बगाउँछु । अहाहा ! त्यो दिव्य वाणीले मेरो आहत एवं आतङ्कित चित्तलाई मुसा-यो, म्वाई खायो र मलाई पलभर भए पनि चिन्तामुक्त तुल्यायो । त्यो अनुपम वाणीका विरलाकोटी स्वामीको पद र नाम सुन्नुहुन्छ, मान्यवर ? निजहजूरको पद पर्यटन मन्त्री हो र शुभनाम हो माननीय योगेश भट्टराई । अमेरिकाबासी मेरा भूतपूर्व नेपाली लगौटियाले पुनः मलाई गिज्याए– यो के हो तेरो नेपालको चाल ? फेरि उस्तै अर्को आयो त ? के तेरो नेपाल ताल न तुकका तोरीलाहुरे गफले सुतीसुती कोरोनामुक्त हुन्छ ? के हो यो बहुलठ्ठीपन ? तेरो सरकारका मन्त्री माननीयको यो सिल्लीपन, यो के हो ? मेरा भूतपूर्व नेपाली मित्रले तर्कको सनासोले मेरो जिब्रो यसरी अँठ्याए, म हतप्रभ र गतिल भएँ । अब म के भनूँ ? दिन मिल्ने तर्कसङ्गत उत्तर आपूmसँग नभएर म पुनः निहुरमुन्टी ‘न’ भएँ । ओठे जबाफ दिँदै मलाई तिम्रो ट्रम्प नि त भन्न पनि मन लागेन । सोचेँ, अर्काको वैचारिक, नैतिक र चारित्रिक खोट देखाएर आफ्नो वैचारिक, नैतिक र चारित्रिक खोटको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नुभन्दा चुत्थो मूर्खता जगतमा अरू के नै पो होला र ?
म स्व–क्वारेन्टाइनको अनिवार्य कैदमा छु । आफ्नै घरको यो बन्दीखानामा मेरो मन केहीमा एकाग्र हुँदैन । न पठनमा, न लेखनमा, न श्रवणमा, न बिजुली पर्दाको दृश्यावलोकनमा । तैपनि म आफ्नै घरको चार किल्लाभित्र खुम्चिन विवस छु । सत्ता, मठ र कर्पोरेट सेठहरुका आज्ञाहरुको अवज्ञा गर्न सधैँ दुस्साहस गर्ने बद्नाम उपद्र्या म ! अहिले कोरोना आतङ्कसामु म मूक आदेशपालक भएको छु । आदेश छ सुतीसुती आदेश दिनमै गर्वबोध गर्ने चटके सरकारको, आज्ञाकारिता म लन्ठ नागरिकको । उदेक लाग्छ, सरकारको आज्ञापालक असल नागरिक त यस मुलुकमा मै मात्र पो हुँ कि ?
April 5, 2020, 3:32 p.m. sriju karki
Khagendra sir ko satik soch sadhubad yo medani vanne manchhe le pani korona ghus ra paani tanki ko3crore ko bhag paayechha jasto chha All neplese are crying but you dirty man die for money and doing curruption Jay Sidha sadha nepali
‘प्रतिनिधिसभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभाको खाँबो चिथोर्न पाइन्छ ?’
प्रश्नहरू माझ क्रान्तिकारीको २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन